साटे भारतको नोयडामा आज बाट सुरु, कस्तो छ चहलपहल ? - ParyatanBazar.com
साटे भारतको नोयडामा आज बाट सुरु, कस्तो छ चहलपहल ?
चैत ११ ,काठमाडौँ । साउथ एसियाज ट्रावल एण्ड टुरिजम एक्सचेन्ज (साटे) भारतको नोयडामा आज बाट सुरु भएको छ । कोभिड पछि नेपालले पनि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै छ।
कोभिडको दोस्रो लहड सुरुको हल्ला बिच आयोजित यस कार्यक्रममा सामान्य चहलपहल सुरु भएको टानका सेक्रेटरी दामोदर ढकालले जानकारी गराएका छन्। “कार्यक्रम आज बाट नै सुरु भएको हो , हामीले आकर्षक स्टल पनि राखेका छौँ तर सुरु दिन भएर हुनसक्छ अपेक्षित मानिसहरू आउनुभएको छैन ” उनले भने। “ढकाल का अनुसार ३ दिने यस कार्यक्रममा कति मानिसले अवलोकन गर्छन् त्यसको लागि चाहिँ अन्तिम दिन सम्मको तथ्याङ्क नै हेर्नुपर्नेछ। यद्यपि नेपाली प्रतिनिधिहरूले साटे बाट धेरै राम्रो अपेक्षा राखेको र उत्साह का साथ प्रवर्द्धनको काम गरिरहेको ढकालले पर्यटन बजारलाई बताए।
साटेको प्रभावकारिता हेरेर क्रमशः भारतका अन्य पर्यटन बजारमा पनि पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाइने नेपाल पर्यटन बोर्ड का सिइओ धनञ्जय रेग्मीले जानकारी दिए । पछिल्लो पटक सरकारले नेपाल भारत यातायात सुचारु गर्ने निर्णय गरेको र यसअघि एअर बल सम्झौता अनुरूप नेपाल भारत दुवै देशबाट दैनिक दुई वटा हवाई उडान समेत भईरहकाले यो कार्यक्रम नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न सहयोगी हुने बोर्डको धारणा छ ।
भारतमा हुने साटेमा पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन उद्योग, बिक्रेता र पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था तथा व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको छ ।
भारत सरकारको पर्यटन मन्त्रालयको सहयोगमा हुने साटेलाई दक्षिण एसियाको महत्त्वपूर्ण पर्यटन एक्सचेन्ज मेलाका रूपमा लिने गरिन्छ । कोभिडको सङ्क्रमणपछि नेपाल पर्यटन बोर्डले डिजिटल माध्यमबाट विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनको काम गरे पनि भौतिक रूपमा सहभागिता जनाउने यो पहिलो कार्यक्रम हो ।